News – Daily Som
Daawo Muuqaal Shanta Hablood ee ugu Taajisrsan Caalamka
By admin on July 1, 2018 News
Naagfta Aduunka ugu taajirsan waxaa laguy magacaabaa Liliane Bettencourt waxa ay dhalatay taariikhda marka ay ahayd October 21, 1922, waxa ayna ku dhalatay magaalada Paris, ee dalka France. Halkaan Hoose ka Daawo Warbixinta Oo muuqaal ah Haweenaydaan ayaa geeriyootay September 21, 2017,iyada oo ku dhimatay halka loo yaqaan Neuilly-sur-Seine, France. Dhaqaalo ahaan waxa ay lahayd US$44.9 billion. kaalinta […]
Dowlada Itoobiya Oo Shegtay in ay Qalbi dhagax ku sii daysay Codsi ka yimid Dowlada Soomaaliya
By admin on June 30, 2018 News
Danjiraha dowladda Itoobiya u fadhiya Soomaaliya Jamaaludiin Mustafa Cumar ayaa sheegay in sii deyntii C/kariin Sheekh Muuse (Qalbi-Dhagax) ay ku timid codsi ka yimid dowladda Soomaaliya. Jamaaludiin Mustafa oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in C/kariin Qalbi Dhagax lagu sii daayay codsiga dowladda Soomaaliya, isla markaana dowladda Itoobiya ay tixgelisay codsigaas. “Sii deynta Qalbi […]
Isbitaalka Ugu wayn ee si bilaasha ah ubixiya Adeegada Caafimaadka oo xalay uu dab baabi’yay Daawadiisii Keydka
Dab ayaa xalay ka kacay isbitaalka degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho, kaasoo sababay khasaare soo gaaray qeybta keydkii daawada ee Isbitaalka. Maamulka isbitaalka ayaa sheegaya in dabka ka kacay isbitaalka uu sababay cilad koronto, waxaana uu socday saacado. Dadka deegaanka ayaa muddo la xarbiyay inay dambiyaan, waxaana markii dambe ku guuleystay inay dabka damiyaan, ka […]
XOG: Halkee ayay Iska Fahmi La’yihiin Madaxda Sare ee Dalka Iyo Mucaaradka Mar hadii ay Dalalka Deriska Heshiiyeen?
Isbadallo xoogaan ayaa ka dhacay dalalka bariga iyo geeska Africa waxaa Heshiiyay Mucaaradka iyo madaxda dalalka Kenya, Itoobiya iyo Koofurta Suudaan iyo dalalkoo dhaca Africa oo u tanaasulay danaha qarankooda iyo dadkooda si looga fogaado dagaalo dhiig ku daato iyo in Qarankooda uu ragaadiyo horumar la’aan dhan walbo ah. Dagaalo Sokeeye ayaa ka qarxay Soomaaliya waxii kadambeeyay […]
ARAG: Ururka Al-Shabaab oo Bur buriyay mid ka mid ah buundooyinka loo maro degmada Qoryooley
Wararka ka imaanaya degmada Qoryooley ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay qarxiyeen mid ka mid ah buundooyinka loo maro degmadaas, kaddib markii ay Miinooyin ku xireen. Buundadan ayaa isku xirta Qoryooley, deegaanka Danaw illaa Shalanbood, waxaana ay marin muhiim u tahay deegaanadaas iyo tuulooyin kale oo dhul beereed u badan. Mas’uuliyiinta Gobolka […]
Daawo oo arag sida ay ukala shidan yihiin Shanta Xidig ee wakhti xaadirkaan ugu horeeya Caalamka
Jessica Alba Jessica Marie Alba xidig American ah jilaane ah sidoo kale Gabar ganavsata ah, waxa ay bilaawday jlista Aflaanta mar hore. waxa ay ku dhalatay halka lagu magaacbo Pomona, California, United States taariikhdu marka ay ahayd, April 28, 1981 da’deedu waa 37 jir Dhirirkeeda ayaa lagu sheegaa 1.69m, ugu danbayn waxa ay haysataa dhaqaale dhan US$340 million […]
XIKMADAMADA WAA BAADIDA QOFKA MUSLIMKA AH AKHRISO 8 XIKMAD OO TAABAGAL AH
By Staff on June 16, 2018 News
Waxaan halkaan ku soo gudbin doonaa dideed xikmadood oo taaba gal ah isla markaana , wax badan kuu faa’iideyn kara, aniga oo midkasta number gooni ah siinayna ayaa waxaa ku soo diyaarinay hoos waxa ayna kala yihiin:- 1. Geedka waxaa lagu qiimeeyaa miraha ama harka uu bixiyo, bini’aadanka waxaa lagu qiimeeyaa ficilada ay sameeyaan. Camalka […]
Daawo Muuqaal Abye Ahmed iyo Farmaajo oo Qabtay Shir Jaraa’id
Madaxweynaha Dowladsa Fedaraalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiye Ahmed ayaa shir jaraa’id oo wadajir ah goor dhow ku qabtay xarunta Madaxtooyada Villa Somalia, kaddib wada hadal ay ku yeesheen. Madaxweyne Faramaajo ayaa soo dhoweeyay booqashada Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya, isagoo sheegay inay wadaagaan xiriir soo jireen, isagoo inay wadaagaan labada […]
Afghanistan announces ceasefire with Taliban, until June 20
By Staff on June 7, 2018 News
KABUL) – Afghan President Ashraf Ghani for the first time announced an unconditional ceasefire with the Taliban on Thursday, coinciding with the end of the Muslim fasting month, but excluded other militant groups such as Islamic State. The decision came after a meeting of Islamic clerics from across the country this week who declared a […]